အတတ်ပညာ China High Pile Open Width Jacquard Knitting Machine ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |Morton စက်ယန္တရား
High Pile Open Width Jacquard Knitting စက်
သင်၏တိကျသောအထည်လိုအပ်ချက်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် High Pile Open Width Jacquard Knitting Machine ကိုရှာဖွေလိုပါသလား။
မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ Higher Precision High Pile Open Width Jacquard Knitting Machine ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
မူရင်း- Quanzhou၊ တရုတ်
ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်- တစ်နှစ်လျှင် 1000 Sets
လက်မှတ်: ISO9001, CE စသည်တို့ကို။
ဗို့အား: 380V 50Hz၊ ဗို့အားသည် ဒေသလိုအပ်ချက်အတိုင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ငွေပေးချေမှု သက်တမ်း- TT၊ LC
ပေးပို့ရက်စွဲ: 30-35 ရက်
1. cam box ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွင်လေယာဉ်အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
2.One Stitch ချိန်ညှိမှု
3.high-precision Archimedes ညှိနှိုင်းမှု။
4. စက်ချိန်ညှိမှုအတွက် လွယ်ကူစွာ ကင်မရာများနှင့် အပ်ဓါးများ၏ ဒီဇိုင်းသည် အထူးသဖြင့် စက်ဝိုင်းအရှည်ကန့်သတ်ချက်၊ မြင့်မားသောနှင့် နိမ့်သောအစုအဝေးအမျိုးမျိုး၊ ပျမ်းမျှအထူမဟုတ်သော၊ ခြောက်သွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့ သမားရိုးကျပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
5.High pile သည် mid-high speed RPM ဖြင့် တူညီသောစက်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ ထုတ်လုပ်မှုသည် အခြားပြိုင်ဘက်များထံမှ 20% ပိုနိုင်သည်။
6. ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ ဒီဇိုင်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ် တွက်ချက်မှု လုပ်ဆောင်ခြင်းစနစ်နှင့် စက်အတွင်းရှိ ကွန်ပျူတာဖြင့် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် ပေါင်းစပ်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အဆင့်မြင့် မိုက်ခရိုလုပ်ဆောင်ခြင်း နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။
7. ၎င်းသည် လက်နှင့်ထိသော အရည်ပုံဆောင်ခဲ မျက်နှာပြင် (LCD) ကို အသုံးပြုထားပြီး စက်တစ်ခုလုံးကို သပ်ရပ်လှပစေသည့် အခန်းများစွာကို မလိုအပ်ဘဲ အလွယ်တကူ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။အကြမ်းမရှိ အထူးဆွဲဆော့ဖ်ဝဲ မလိုအပ်ပါ။
8. ဤစက်သည် ကင်မရာများကို ပြောင်းလဲကာ ဒိုင်ခွက် အစိတ်အပိုင်းများ အနေအထားကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ကွင်းပတ်အရှည်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး စက်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ပြောင်းလဲရန် မလိုအပ်ပါ။၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
9.High pile open width jacquard knitting machine သည် Jacquard Cut Pile Knitting Machine ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာကိုအခြေခံ၍ အထူးဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး tube machine ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးပါဝင်ပြီး ခေါက်အမှတ်အသားမပါသောအက္ခရာများပါရှိပါသည်။စက်များသည် စက်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်စေပြီး အထည်များကို ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပြီး တိကျစေရန်အတွက် CAD ကို အသုံးပြုသည်။
10. အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအများစုကို တိကျမှုနှင့် တိကျမှုတိုးတက်စေရန်အတွက် အဆင့်မြင့်ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာမှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။နှလုံး၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အတိအကျခွဲဝေပေးသည်။
11. ခေါက်အမှတ်အသား၊ အထည်များကို အသုံးပြုမှု လုံးဝမရှိပါ။အထည်များကို မဖြုန်းတီးဘဲ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
12.ထိုးပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိအောင် တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ရန် ကြိတ်စက်စနစ်တွင် အရှိန်ပြောင်းလဲသည့် စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသည်။အချိန်နှင့် ပါဝါ မဖြုန်းတီးဘဲ အဆင်ပြေစွာ လည်ပတ်ပါ။
13. အထည်၏တင်းမာမှုကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန် Spreader တပ်ဆင်ထားသောစက်။ထည်ထည်ချဲ့ထွင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုပိုမိုထင်ရှားသောနှစ်ထပ်-စတီးလ်-ချဲ့ဒလိမ့်တုံးကို အသုံးပြု၍ စနစ်အား ဖယ်ရှားပါ။
ဤစက်သည် ဓာတုဖိုက်ဘာပိုးစီးရီး၊ ချည်၊ သိုးမွှေးချည်သန့်သန့်နှင့် superfine ဖိုင်ဘာများအဖြစ် ယက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။Pile length ကို 35-60mm ပြုလုပ်နိုင်သည်။မီးခိုးရောင် နှစ်ထပ်ထည်များကို စက်ပေါ်ရှိ ဓါးဖြင့် ဖြတ်ခြင်းဖြင့် မီးခိုးရောင် အထည်ရှည် နှစ်စုံဖြစ်လာသည်၊ ကြမ်းတမ်းသော pile နှင့် fine pile နှင့် jacquard တို့သည် အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး ပုံသဏ္ဍာန် ကွဲပြားသော သိုးသားရေ သို့မဟုတ် အမျိုးအစား high pile များကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။၎င်းတို့ကို အဝတ်အစား၊ အနားသပ်၊ အိပ်ယာ၊ အရုပ်များ၊ ဆိုဖာထည်၊ ကော်ဇော၊ စောင်နှင့် ကားကူရှင် စသည်တို့တွင် အသုံးပြုသည်။
ယခင်- Lower Loop Cut Open Width Jacquard စက်
နောက်တစ်ခု: Single Jersey Knitting စက်
ပြောင်းပြန် Terry မြို့ပတ်ချည်ထိုးစက်
နှစ်ထပ်ဂျာစီ Jacquard မြို့ပတ်ချည်ထိုးစက်
Lower Loop Cut Open Width Jacquard စက်
ဘက်စုံသုံး High Pile Knitting စက်
Single Jersey Knitting စက်